ZigBee 3.0: Ny Fondation for the Internet of Things: Natomboka ary nosokafana ho an'ny mari-pankasitrahana | Owon Technology
ZigBee 3.0: Ny Fondation for the Internet of Things: Natomboka ary nosokafana ho an'ny mari-pankasitrahana
(Fanamarihan'ny Editor: Ity lahatsoratra ity, nadika avy amin'ny ZigBee Resource Guide · Fanontana 2016-2017.)
Zigbee 3.0 dia ny fampiraisana ireo fenitra tsy misy tariby an'ny Wireless mivarotra ho vahaolana tokana ho an'ny tsena sy appliations mitsivalana rehetra. Ny vahaolana dia manome interoperability mirindra eo amin'ny isan-karazany ny fitaovana marani-tsaina ary manome ny mpanjifa sy ny orinasa fidirana amin'ny vokatra sy serivisy manavao izay miara-miasa mba hanana fiainana andavanandro.
Ny vahaolana ZigBee 3.0 dia natao ho mora ampiharina, hividy ary hampiasa. Ny ekosistra tokana mifandraika tanteraka dia manarona ny tsena mitsangana rehetra manala ny filana mifidy eo amin'ny mombamomba azy manokana toy ny: Home Automation, Light Link, Building, Retail, Smart Energy ary fahasalamana. Ny fitaovana sy cluster PRO nolovaina rehetra dia hampiharina amin'ny vahaolana 3.0. Ny fampifanarahana mandroso sy miverina miaraka amin'ireo mombamomba ny lova PRO dia voatazona.
Zigbee 3.0 dia mampiasa ny famaritana IEEE 802.15.4 2011 MAC / Phy miasa ao amin'ny tarika 2.4 GHz tsy misy fahazoan-dàlana mitondra fidirana amin'ny tsena manerantany miaraka amina fenitra amin'ny onjam-peo sy fanohanana avy amin'ireo mpamatsy sehatra am-polony. Niorina tamin'ny PRO 2015, ny fanitsiana iraika amby roapolon'ny indostria mitarika ny fenitry ny tambajotra ZigBee PRO, ny ZigBee 3.0 dia mitrandraka ny fahombiazan'ny tsena folo taona an'ity tambajotra ity izay nanohana fitaovana amidy miliara amidy. Zigbee 3.0 dia mitondra fomba fiarovana amin'ny tambajotra vaovao amin'ny tsena manaraka ny filàna miovaova hatrany amin'ny tontolon'ny fiarovana IoT. Ny tambajotra Zigbee 3.0 dia manome ihany koa ny fanohanana ny Zigbee Greeen Power, ny faran'ny angovo fanovozana angovo "tsy misy bateria" amin'ny alàlan'ny fanomezana asa proxy mitovy.
Ny Zigbee Alliance dia nino foana fa ny tena fifandraisan-davitra dia avy amin'ny fenitra amin'ny ambaratonga rehetra amin'ny tambajotra, indrindra ny haavon'ny fampiharana izay manohina ny mpampiasa indrindra. Na inona na inona manomboka amin'ny fidirana tambajotra ka hatrany amin'ny fivezivezena amin'ny fitaovana toy ny na tsia, dia voafaritra avokoa ireo fitaovana avy amin'ny mpivarotra isan-karazany. Zigbee 3.0 dia mamaritra ny fitaovana 130 miaraka amina karazana fitaovana midadasika indrindra ao anatin'izany ny fitaovana ho an'ny: automatisation an-trano, jiro, fitantanana angovo, fitaovana matanjaka, fiarovana, sensor ary vokatra fanaraha-maso fikarakarana ara-pahasalamana. Izy io dia manohana ny fametrahana DIY mora ampiasaina ary koa ny rafitra napetraka ho matihanina.
Te hanana fidirana amin'ny Zigbee 3.0 Solution ve ianao? Azo zakan'ny mpikambana ao amin'ny Alliance Zigbee izy io, koa midira amin'ny Alliance anio ary midira ho anisan'ny tontolo iainantsika.
Nosoratan'i Mark Walters, CP an'ny fampandrosoana stratejika · Alliance ZigBee